गर्मीमा झिंगा, साङ्ला र लामखुट्टे कसरी भगाउने ? यस्तो छ सरल उपाय | Seto Khabar
गर्मीमा झिंगा, साङ्ला र लामखुट्टे कसरी भगाउने ? यस्तो छ सरल उपाय
साङ्लो भगाउने बिधी : साङ्ला गर्मीमा एकदमै छिटो फैलन्छ । यसको सन्तान पैदा गर्ने क्षमता उच्च हुन्छ । सजिलै मार्न पनि सकिदैन । किनभने यसको टाउको छिनाइयो भने समेत केहि दिनसम्म जीवित रहन सक्छ । यो प्राय भान्साको कुनाकाप्चा, खाट, दराज आदिमा लुकेर बस्छ । यसरी लुकेर बस्ने साङ्ला भगाउन केहि घरेलु विधी पनि अपनाउन सकिन्छ ।
झिंगा भगाउने विधी : झिंगाले खानेकुरालाई दूषित बनाइदिन्छ । गर्मीमा रोग सार्ने माध्याम पनि हो, झिंगा । त्यसैले झिंगालाई कसरी फैलन नदिने भन्नेमा हामी चिन्तित हुने गछौं ।
लामखुट्टे भगाउने विधी : लामखुट्टेको टोकाई र आवाजले राती सुत्न दिदैन । यसले संक्रमित व्यक्ति, जीव जनवारलाई टोकेर हाम्रो शरीरमा रोग समेत सार्न सक्छ । गर्मीमा लामखुट्टेले थुप्रै रोग सार्ने भय रहन्छ ।
४. पुदिना वा त्यसको तेलमा किटनासक गुण हुन्छ । घरको आसपासमा पुदिना रोप्ने र त्यसको रस झ्याल ढोकामा छर्कनुपर्छ, लामखुट्टेको संक्रमण हट्छ ।एजेन्सी